Ku "rhulumente olinganiselwe," amandla karhulumente ukuba angenelele ebomini nasemisebenzini yabantu aphelelwe ngumgaqo-siseko. Ngelixa abanye abantu bethetha ukuba akukhawulelanga ngokwaneleyo, urhulumente waseUnited States ungumzekelo woburhulumente obuthatyathwe ngokomgaqo-siseko.
Urhulumente ongenakulinganiswa ngokuqhelekileyo uthathwa njengengcamango engqubuzana neemfundiso ze " absolutism " okanye i-Right of God of Kings, enika umntu ongatshatanga ulwalamandla olungenammiselo phezu kwabantu.
Imbali yombuso olinganiselwe kwimpucuko yeNtshona ibuyela kwi-English Magna Carta ye-1512. Nangona umda weMagna Carta kumagunya okumkani ukhusela kuphela icandelo elincinane okanye abantu baseNgesi, linike iibhononi zamakhosi athile amalungelo athile sisebenza ngokuchasene nemigaqo yenkosi. Ibhili Yelungelo LesiNgesi, elivela kwi-Glorious Revolution ka-1688, iyanciphise ngakumbi amandla olawulo lobukhosi.
Ngokuphambene noMagna Carta kunye neYilwayo Yelungelo lamaNgesi, uMgaqo-siseko wase-United States ubeka urhulumente ophakathi ulungelelaniswe ngolu xwebhu ngokweenkqubo zamasebe amathathu karhulumente kunye nemida phezu kwamandla omnye, kunye nelungelo labantu ukukhetha ngokukhululekile umongameli kunye namalungu eCongress.
URhulumente ongekho phantsi eUnited States
Amagqabantshintshi, avunywe ngo-1781, ayenomgaqo-nkqubo ophantsi. Nangona kunjalo, ngokungaphumeleli ukubonelela nayiphi na indlela yokuba urhulumente wesizwe akwazi ukuhlawula imali yokuhlawula ityala layo eliyingxowankulu leMfazwe yeNguqulelo, okanye ukuzikhusela ngokuchasene nolwaphulo lwasemzini, loxwebhu luye lwashiya isizwe kwiingxabano zemali.
Ngaloo ndlela, inxalenye yesithathu ye-Continental Congress yabiza iSivumelwano soMgaqo-siseko ukususela ngo-1787 ukuya ku-1789 ukuze ithathe indawo ye-Articles ye-Confederation kunye noMgaqo-siseko wase-US.
Emva kwempikiswano enkulu, iindwendwe zeNgqungquthela yomGaqo-siseko zithathwe imfundiso yombuso olinganiselwe ngokusekelwe kwinkqubo efunwa ngumgaqo-siseko olwahlukileyo ngamagcisa kunye nokulinganisa njengoko kuchazwe nguJacob Madison kwii-Federalist Papers, No. 45.
Umbono kaMadison wolawulo olungapheliyo lugcinwe ukuba amagunya karhulumente omtsha kufuneka apheliswe ngaphakathi kuMgaqo-siseko ngokwawo nangaphandle kwabantu baseMelika ngokusebenzisa inkqubo yokumamela ukhetho. UMadison uphinde wagxininisa isidingo sokuqonda ukuba imingcele ebekwa kurhulumente, kunye noMgaqo-siseko we-US ngokwawo, kufuneka unikeze ukulungelelaniswa okufunekayo ukwenzela ukuba urhulumente enze utshintsho njengoko kufuneka kule minyaka.
Namhlanje, iBhili yamaLungelo - izilungiso ezi-10 zokuqala-iyingxenye ebalulekileyo yoMgaqo-siseko. Ngelixa izilungiso zokuqala ezisibhozo zichaza amalungelo kunye nokukhuselwa okugcinwa ngabantu, isiTshintsho sesithandathu kunye neSilungiso seshumi kuchaza inkqubo yoorhulumente onqongophe njengoko kuqhutyelwa eUnited States.
Ngokubambisana, izilungiso ze-Ninth neThumi zichaza umahluko phakathi kwamalungelo "abhalwe" ngokucacileyo axelwe kubantu ngokusemthethweni noMgaqo-siseko kunye namalungelo "angokwemvelo" anikwe bonke abantu ngohlobo okanye uThixo. Ukongezelela, iSilungiso seshumi sichaza amandla ahlukeneyo kunye nowabelwana ngawo oorhulumente wase-US kunye noorhulumente boorhulumente abenza i- American version of federalalism .
Iphi amandla eMandla kaRhulumente waseMelika?
Ngelixa lingazange libhekiselele kwigama elithi "urhulumente olinganiselwe," uMgaqo-siseko unciphisa amandla karhulumente karhulumente ngeendlela ezintathu ezibalulekileyo:
Njengoko kuboniswe ngokubanzi kwiSilungiso sokuQala kunye nakulo lonke iBhili yamaLungelo, urhulumente akavumelekanga ukuphazamiseka ngokuthe ngqo kwiindawo ezithile zobomi babantu, njengenkolo, intetho kunye nokubambisana .
Amagunya athile anqatshelwe ukuba urhulumente wombuso anikezelwe kuphela kuorhulumente kunye noorhulumente bendawo.
Amandla kunye namalungelo angagcinwanga ngu-federal okanye urhulumente karhulumente agcinwa ngabantu.
Kwi-Practice, Limited okanye 'Engenamkhawulo' Urhulumente?
Namhlanje, abaninzi abantu bayazibuza ukuba ngaba imiqobo kwiBhili yamaLungelo ayenakho okanye iyakwazi ukunciphisa ngokwaneleyo ukukhula koorhulumente okanye ubukhulu bokuba ungenelela kwimicimbi yabantu.
Nangona uhambelana nomoya weBhili yamaLungelo, ulawulo lolawulo lwekarhulumente kwimimandla engqubuzanayo njengenkolo ezikolweni , ukulawulwa kwebhamu , amalungelo okuzala , umtshato wesini omnye , kunye nolwazi lwezesini, uye walula ubuchule beCongress kunye ne- federal iinkundla ukuba zisichaze ngokuchanekileyo kwaye zisebenzise ileta yomGaqo-siseko.
Ngamawaka emimiselo yomgaqo-nkqubo eyenziwe minyaka yonke ngamagunya amaninzi [edibanisa] ii-arhente ezizimeleyo ezizimeleyo, amabhodi kunye nee-commissions [link], sibona ubungqina obuninzi bokuthi ulawulo lukahulumeni lukhulile kangakanani kwiminyaka.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukukhumbula ukuba phantse kuwo onke amaxesha, abantu ngokwabo baye bafuna ukuba urhulumente adale kwaye agxininise le mithetho nemimiselo. Umzekelo, imithetho ejoliswe ekuqinisekiseni izinto ezingagqitywanga ngumGaqo-siseko, njengamanzi acocekileyo kunye nomoya, izindawo zokusebenzela ezikhuselekileyo, ukhuseleko lwabathengi, kunye nezinye ezininzi ziye zafunwa ngabantu ngaphaya kweminyaka.
Khanyisa ikhandlela nge-Moshi - Ukuhamba ngeFlamme Isayensi
I-Mabon Folklore & Amasiko
Imibono yobuKristu ngemiyalelo elishumi
Inkcazo kunye neSimboli se-Hanukkah Menorah okanye i-Hanukkiyah
Iliphi igama elithi "isiJamani"?
UBawo oNyana-iNdodana Inventor Duos
Biography kaFrancoco de Orellana
IiNkqubo zoBuninzi bobuNtshatsheli beHlabathi beBanga labaPhakamileyo beSikolo
I-Winona State University Admissions